Chọpụta uru dị na iji ntutu ntutu | Bezzia
Kedu ihe kpatara ị ga - eji jiri ntutu ntutu
Susana Garcia | 03/04/2021 20:00 | Mma, Mma ngwaahịa
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ntutu gị dị ogologo, mkpụmkpụ, ụcha, ogologo, aja aja, aja aja ma ọ bụ keisi ocha, ebe ọ bụ na ihe na-adịkarị mkpa n’ikpeazụ bụ na ị nwere ahụike ma lekọta ntutu isi, ihe na-anaghị adị mfe inweta. Anyị ga-enye gị ụfọdụ ole echiche iji mụta otu esi eji ọbara ntutu. Dị nnọọ ka anyị na-elekọta ihu anyị, ọ dịkwa mkpa ilekọta ahụike nke ntutu. Ọ dị mkpa itinye ngwaahịa dị mkpa maka nke a.
Anyị ga-ekwu maka ya ihe mere ị ga-eji jiri ntutu ntutu na abamuru nke ime otú ahụ. Ọbara ahụ bụ ngwaahịa anyị chọtara maka ihu na nke na-etinye uche n'ihe ndị na-arụsi ọrụ ike iji lekọta ntutu isi nke ọma, na-eme ihe ọ bụla dị mkpa, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ụdị ọbara.
1 Gịnị ka ọ bụ maka
2 Otu esi etinye ogwu
3 Ọbara maka ntutu ọ bụla
Gịnị ka ọ bụ maka
El Ọbara ntutu bụ ihe dị irè iji lekọta ntutu isi nke ọma ndị mebiri emebi ma ọ bụ ndị chọrọ nlekọta ọzọ, karịa ihe anyị na-enye kwa ụbọchị. N'ime ngwaahịa ndị a, ọ na-enwekarị nnukwu mgbatị nke ihe ndị na-arụ ọrụ na-enyere aka mezie mmebi nke ọnwa na ntutu, n'ihi ya, ha na-abụ ihe ịchọ mma dị oke ọnụ. Ọ bụ ezie na ọ bụkwa eziokwu na a na-etinye ọgwụ mmiri ọgwụ site n'oge ruo n'oge, iji gwọọ ntutu isi. Nwere ike ịchọta serum nke na-emegharị maka mkpa dị iche iche, mana nke bụ eziokwu bụ na ụdị ngwaahịa ndị a n'ozuzu ha na-elekwasị anya na-enye ntutu na-enwu gbaa, na-ekpuchi akara, na-edozi ya ma na-elekọta ntutu isi.
Otu esi etinye ogwu
El a na-etinye ọbara mmiri na obere obereDika obu ngwa ahia, anyi ekwesighi iji otutu. Otu ihe ahụ na-aga serums ihu. Ole na ole tụlee ọ na ịhịa aka n'ahụ n'ime akọrọ ma ọ bụ keguru mmiri ntutu, dabere na chọrọ mmetụta. A na-etinye ya na ngwụcha ma ọ na-arịgo. Dị ka ọ na-adị, a pụkwara itinye ya na ntutu na mgbọrọgwụ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-agụrịrị ntuziaka nke onye nrụpụta iji mata kpọmkwem ojiji ya na otu esi esi kesaa ya.
Ọbara maka ntutu ọ bụla
Taa anyị na-achọta ọtụtụ ụzọ dị iche iche gbasara ihe ịchọ mma. Otu n'ime ha bụ na anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ụdị nke ngwaahịa ntutu na isiokwu nke ọbara. Otu n'ime ihe kachasị zụrụ n'oge na-adịbeghị anya bụ nke na-elekwasị anya na ilekọta ntutu isi site na itinye okpomọkụ, na-ezere frizz. Typesdị ọbara ndị a na-ejikarị ntutu ntutu ọ bụla eme ihe ka ọ ghara imebi ntutu site na itinye ngwaọrụ ndị na-ekpo ọkụ dịka ígwè ma ọ bụ ọkpọ ọkpọ. A na-echebe nsonazụ ahụ ntutu nwere cuticle mechiri emechi, na-enwu gbaa na enweghị nkesasị. Ọ bụ ọbara na-echebe ma gbochie mmebi nke ntutu.
El ntutu ntutu ọzọ bụ ụdị ntutu ọzọ ị kwesịrị ị na-achọ ọbara adabara njirimara ya. E nwere ụfọdụ ndị nwere ike inyere aka ịnọgide na-enwe curl na hydrate. Ntutu isi a na - eme ka o sie ike ma ghara inwu, na mgbakwunye na - eme ka ọ dịkwuo mfe, ya mere, ọbara ahụ nwere ike ịbụ ezigbo mgbakwunye iji nye ya mmiri site n'oge ruo n'oge nke na-eme ka a kọwaa curls na mmiri. Frizz bụ otu n'ime nnukwu ndị iro nke ụdị ntutu a.
El ọbara iji hydrate bụ ihe ọzọ na-achọsi ike. Nọmalị, ọ bụrụ na anyị na-achọ a mma ọbara, ọ bụ iji miri hydrate niile ụdị ntutu. Enwere ọbara nke enwere ike ịchọta ya na ọnụ ahịa dị oke ọnụ ma na-enyere anyị aka inyekwu ntutu isi. Nsogbu nke nkụ na-agwụ bụ ihe na-adịkarị na-emekarị na serums nwere ike inye aka kwụsị nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Kedu ihe kpatara ị ga - eji jiri ntutu ntutu
Macaroni na akwukwo nri cheese
Omume bara uru maka ọrịa ogbu na nkwonkwo